Faransiiska ,UK iyo Holland oo joojiyay dhammaan booqashooyinka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga – Radio Daljir
Faransiiska ,UK iyo Holland oo joojiyay dhammaan booqashooyinka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga
Oktoobar 19, 2018 9:54 b 0
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa joojiyay dhammaan booqashooyinka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga, iyadoo tallaabadan ay ka dambeysay maqnaanshaha Wariyaha Jamaal Kashoggi oo la sheegay in lagu dhex dilay Qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Sidookale dadlka xiriika diblomaasiyadeed Sacuudiga ujaray waxaa kamid ah Jarmalka, UK iyo Holland .
Wararka uu helayo radio Daljir ayaa sheegaya in shirkii Riyadh ee looga hadlaayay maalgashiga qarka uu u saaranyahay in uu bur buro.
Dalalka reer Galbeedka ayaa cadaadis xooggan saaray Sacuudiga, tan iyo markii 2-dii bishan la waayay Jamal Kashoggi, xilligaasoo uu galay Qunsuliyadda Sacuudiga, ilaa iyo hadana lama hayo nolol iyo geeri .
Puntland oo isku diyaarinaysa dagaal kama dambays ah oo lagu xoraynayo gobolka Sool